केन Follet को जन्मदिन छ। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध उपन्यास को6बाट पदावली वर्तमान साहित्य
केन Follet को जन्मदिन छ। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध उपन्यासहरु को6वाक्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, नोभेला
केन follet जून,, १51949। मा जन्म भएको थियो कार्डिफ, वेल्स, र अधिक समय लेखकहरूको एक बन्न पुगेको छ धेरै प्रख्यात र पढ्न सबै विश्व को। किनभने त्यहाँ केही मानिसहरु छन् जसले पढेका छैनन् पृथ्वीको खम्बाहरू। त्यहाँ बस्नेहरूका लागि मेरा वाक्यांशहरूको चयन छ उनका उपन्यासहरू कसले यो कहाँ राखेका छन्: क लोकप्रिय समकालीन साहित्यको सन्दर्भ.
1 केन follet
1.1 थप कामहरू
2 पृथ्वीको खम्बाहरू
3 राक्षसको पतन
4 संसारको जाडो
5 सेन्ट पीटर्सबर्गका मानिस
6 स्वतन्त्रता भनिने ठाउँ
7 अन्तिम उडान
Follet ती लेखकहरु मध्ये एक हो जो उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् कि कसरी सर्वसाधारण सम्म पुग्न सकिन्छ। तपाईंको कथाहरूको साथ सजिलो वा दोहोर्याइएको पार गर्दै ऐतिहासिक प्लॉटहरू र फोकलोरिक टोन, के कसैले उहाँलाई अस्वीकार गर्न सक्छ उहाँको हो योग्यता ती पाठकहरुमा (बहुमत) जो साहित्य मा ती अवधारणाहरु संग कुनै समस्या छैन।
तिनीहरूले टेलिभिजनमा को अनुकूलन को लागी यी हप्ता बदलेको छ उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध उपन्यास, पृथ्वीको खम्बाहरू. तर ती कुनै संस्करणहरू सधैं आफ्नो मूल लेखोटको कम हुन्छन्। र यद्यपि सफलता को पछाडि पुस्तकहरु संग पुन: मान्यता, मध्यकालीन किंग्सब्रिज क्याथेड्रलको निर्माणको इतिहासलाई थोरैले प्रभाव पारेको छ। न त यसको त्रिएकमा निरन्तरता, एक अन्तहीन संसार y आगोको स्तम्भ तिनीहरूले यो पनि पार गरेनन्।
को त्रयी शताब्दी बनेको राक्षसको पतन, संसारको जाडो y अनन्त कालको थ्रेसोल्ड. र अधिक जस्तै साँचो रेबेकामा छ, लक्ष्यमा, उच्च जोखिम, तेस्रो जोडाहरू वा अजि .्गरको मुखमा। यो एक हो वाक्यांशहरूको संकलन तिनीहरू मध्ये केही।
म तिमीलाई एक आँधी-बेह्री जस्तै, सिंह जस्तो, ईर्ष्यालु क्रोधको जस्तो मन पराउँछु।
फिलिपले महसुस गरे कि गृहयुद्धमा पहिलो दुर्घटना न्यायको हो।
कसम मात्र शब्द हो! यो तुलना गर्न केहि छैन। यो वास्तविक हो, यो तपाईं र म हो।
शपथ खानु भनेको तपाईको प्राणलाई खतरामा पार्नु हो, उनी भन्छन्। कहिल्यै शपथ खानु हुँदैन जबसम्म तपाईं त्यसलाई भत्काउनु भन्दा मर्नुहुन्न।
एक अर्कालाई प्रेम गरेको दुई वयस्कहरूले एक अर्काको आज्ञा पालन नगरीकन निर्णयहरू गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
स्मार्ट मानिसहरु जसले तपाईसँग असहमत छन् सुन्ने क्षमता एक कठिन पाउनु पर्ने प्रतिभा हो।
"होईन, म लर्ड फिजर्बर्ट वा श्री। पर्सेवल जोन्सको अपमान गर्ने छैन," उनले अगाडि प row्क्तिमा दुईवटा शीर्ष टोपीलाई औंल्याए। म मात्र भन्छु: सज्जनहरू, तपाईं इतिहास हुनुहुन्छ।
एरिक ती अयोग्य व्यक्तिहरू मध्ये एक थिए जसलाई जीवन यति डरलाग्दो छ कि तिनीहरू फलामको अधिकारले वशमा बस्न रुचाउँछन् र कुनै विवादको कुरा स्वीकार्ने सरकारले के गर्ने र के सोच्न भन्छन्। तिनीहरू बेवकूफ र खतरनाक थिए, तर उहाँ जस्ता धेरै थिए।
चुप लागेर बस्नु भन्दा केही गर्नु भन्दा खराबको नतिजा भोग्नु राम्रो हुन्छ।
यदि तपाईं सामेल हुनुहुन्न भने, के हुन्छ तपाईंको गल्ती हो।
सेन्ट पीटर्सबर्गका मानिस
प्रेमको सम्बन्ध उपासनाको जस्तो छैन। एक देवताको पूजा गरिन्छ। केवल मानवलाई माया गर्न सकिन्छ। जब हामी महिलाको पूजा गर्छौं हामी उनलाई प्रेम गर्न सक्दैनौं। त्यसोभए जब हामी फेला पार्छौं कि ऊ देवता होइन भने हामी उसलाई घृणा गर्छौं। त्यो दुख।
स्वतन्त्रता भनिने ठाउँ
डाक्टरले आफ्ना हातहरू मन्दिरहरूमा आराम गरे र औंलाले हल्का महसुस गरे।
- तपाईं भ्रमित हुनुहुन्छ?
- प्रेम र विवाह मलाई भ्रमित, तर त्यो मेरो टाउको दुख्छ किन हो।
उनलाई थाहा थियो कि थिएटर र नाटकहरू अस्तित्वमा छन्, तर उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् कि यो अहिले उसको आँखाले देखेको जस्तो देखिन्छ: तातोता, बत्तीहरूबाट धुवाँ, उत्कृष्ट अवधिका पोशाकहरू, चित्रित अनुहारहरू र सबैभन्दा माथि, भावना ... क्रोध, भावुक प्रेम, ईर्ष्या र घृणा यति स्पष्ट प्रतिनिधित्व गर्दछ कि उसको मुटु छातीमा उड्ने उस्तै भावनाले उसले महसुस गर्यो कि यदि यी सबै वास्तविकताका लागि भइरहेको थियो भने।
त्यति मात्र त्यस्तो भिन्नताका साथ हामी विश्वका चारै तिर जान सक्थ्यौं हाम्रो टाउको माथि उठेर, यसलाई शर्मको चिन्हको रूपमा झार्नुको सट्टा।
हामी सोच्छौं कि हामीले तपस्या भोगिरहेका छौं, तर हामीलाई शब्दको अर्थ थाहा छैन।
इसाई धर्मका संस्थापकले पनि थोरै समस्या उत्पन्न गरे।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » केन Follet को जन्मदिन छ। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध उपन्यासहरु को6वाक्य
ल्याटिन: रोमान्सको बुबा
कसरी उपन्यास लेख्ने: चरित्र सिर्जना गर्ने